Soomaaliya, 01 June 2019
Puntand: Shiinaha oo Dhisaya Dekedda Eyl
Maamulka Puntland ee Soomaaliya iyo Shirkadda CCECC ee dalka Shiinaha ayaa shalay kala saxiixday heshiis ay shirkaddaasi ku dhisi doonto dekedda Eyl iyo mashaariic kale.
Dhageyso Barnaamijka Dhacdooyinta Toddobaadka, oo aan aalaba dib dhageysatayasha ugu soo xasuusino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadka
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxaa soo jeedinaya Casha Cuud iyo Ibrahim Daandureey.
Muqdisho: Diyaar-garoowga Ciidda
Suuqyada Magaalada Muqdisho ayaa waxaa si aada looga dareemayaa diyaar-garowga ay dadka ugu jiraan maalinta Ciidul-Fidriga ee todobaadkan.
Marxuumka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Khayre (Fiimto) ayaa la dilay xilli uu kasoo baxay masjid uu saaladda Taraawiixda kusoo tukaday waxaana dad goobjoog ahaa ay sheegeen in labo oo dhalinyaro ah oo kuhubaysan bastoolado ay ka toogteen madaxa.
125 qof oo isugu jiray dumar, rag iyo caruur oo dooni ay ka qaaday Dekedda Cadan ee dalka Yemen galabtii Arbacadii la soo dhaafay ayaa la geeyey magaalada Berbera.
Faaqidaadda: Cabashada warbaahinta ee dowladda Somalia
Roobab waxyeello gaystay oo ka da'ay Puntland
Galmudug oo xiriirka u jartay dowladda dhexe
Khilaafkii u dhaxeeyay maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah oo muddo soo jiitamayay ayaa haatan galay marxalad kale, waxaana Galmudug ay sheegtay inay xiriirkii wada shaqeyn u jartday dowladda federaalka ah.